Weerar lagu haayo wasiir Muslim ah | Somaliska
Mid ka mid ah wasiirada Muslimka ah ee tirsan dowlada cusub ee Sweden ayaa waxaa durbadiiba ku bilowday weeraro siyaasadeed oo dadka qaarkiis ay ku tilmaamayaan in uu yahay waxa ay ugu yeeraan Islamist. Wasiirka guryaha Mehmet Kaplan ayaa durbadiiba dadka neceb waxay bilaabeen in ay saxaafada aflagaado iyo warar been abuur ah u soo mariyaan.
Isbuucaan ayaa wargeyska Dagens Industri waxaa haweenay lagu magacaabo Nalin Pekgul oo horay uga tirsanaanjirtay baarlamaanka Sweden isla markaana ka soo jeeda jinsiyada kurdida waxay weerar cad ku qaaday Mehmet Kaplan oo isaguna ka soo jeeda Turkey (Sida aad la socotaan kurdiyiintu ma jecla turkida). Haweenaydaan ayaa Kaplan ku eedaysay in uu yahay Islaamista wata ajande qarsoon. Kaplan oo ka jawabay hadalka haweenaydaan ayaa si degan ugu sheegay in ay doonayso in ay abuurato cadoow balse uusan doonayn in uu noqdo cadowgeeda.
Sidoo kale maanta ayaa isla wargeyska Dagens Industri waxaa nin bare ka ah jaamacada Malmö uu dhaliilay in Kaplan loo Magacaabay Wasiir isagoo sheegay in Muslimiinta iyo Islaamiyiinta ay siyaadayso saamaynta ay ku yeelanayaan siyaasada Sweden.
Weerarada degdega ah ee durbadiiba lagu qaaday Mehmet Kaplan ayaa muujinaya naceybka loo qabo in qof Muslim ah oo diintiisa ku dhagan uu jaggo siyaasadeed ka qabto Sweden. Weerarada qaar ayaa ka imaanaya dad isku sheegaya in ay yihiin Muslimiin dhexdhexaad ah oo wax kasta u samaynaya sidii ay magac uga heli lahaayeen saxaafada Sweden iyagoo aflagaado iyo xagxagasho ku haya Muslimiinta kale ee heerka ka gaaray siyaasada sida Mehmet Kaplan.
10-ka magaalo ee Sweden ugu faqiirsan iyo kuwa ugu taajirsan
Macalimiinta oo loo fasaxay in ay mamnuuci karaan Niqaabka
Kaarka Aqoonsiga oo hada la sameysan karo